Luka 23 - Nkwa Asem (NA-TWI) | Biblica
Luka 23 - Nkwa Asem (NA-TWI)
1Afei baguafo no sɔre de Yesu kɔɔ Pilato anim. 2 Wofii ase totoo n’ano se, “Saa onipa yi tu nkurɔfo aso. Ɔmpene so sɛ ɔmanfo tua tow ma Kaesare aban, na ɔfrɛ ne ho sɛ ɔhene Kristo no.”
3 Eyi maa Pilato bisaa no se, “Wone Yudafo hene no anaa?” Yesu buaa no se, “Ɛno ara na woaka no.”
4 Pilato ka kyerɛɛ asɔfo mpanyin ne nnipadɔm no se, “Minhu asɛm biara a megyina so abu onipa yi fɔ.”
5 Nanso wɔn bo antɔ wɔn yam kɔɔ so kae se, “Ɔyɛ ɔmammɔfo. Baabiara a ɔkɔ no, ɔnam ne nkyerɛkyerɛ so de hwanyan nnipa no tia aban. Ɔde ne nkyerɛkyerɛ yi fi Galilea bɛfaa Yudeaman mu nyinaa abedu Yerusalem ha.”
6 Pilato tee asɛm yi no, obisae se, “Onipa yi yɛ Galileani anaa?”
Wɔde Yesu kɔ Herode anim
7 Bere a wɔka kyerɛɛ Pilato se Yesu yɛ Galileani no, ɔka kyerɛɛ wɔn se, sɛ ɛte saa de a, wɔmfa no nkɔ ɔhene Herode anim, efisɛ, Galilea hyɛ n’ase. Saa bere no ara nso na ɔhene Herode wɔ Yerusalem. 8 Esiane sɛ wate Yesu ho asɛm na osusuw nso sɛ, sɛ ɔba n’anim a, ɔbɛyɛ anwonwade akyerɛ no no nti, bere a ohuu no no, n’ani gyei yiye, efisɛ, na ɔpɛe sɛ obehu no no, akyɛ.
9 Wobisabisaa Yesu nsɛm bebree nanso emu biara nni hɔ a oyii ano. 10 Asɔfo mpanyin no ne mmara no akyerɛkyerɛfo no kɔɔ so ara kaa nsɛm a ennim guu no so.
11 Herode ne n’asomfo no bɔɔ Yesu adapaa, dii ne ho fɛw. Afei Herode hyehyɛɛ no sɛ ɔhene san de no kɔmaa Pilato. 12 Da no ara, Herode ne Pilato a anka wɔyɛ aka no, bɔɔ mu.
Pilato di ma Yesu
13 Wɔde Yesu kɔmaa Pilato no, ɔfrɛɛ asɔfo mpanyin ne Yudafo mpanyin ne nnipadɔm no, 14 ka kyerɛɛ wɔn se, “Mode onipa yi brɛɛ me se, ɔyɛ obi a ɔnam ne nkyerɛkyerɛ so hwanyan nnipa, tia aban. Mahwehwɛ nsɛm a moka guu ne so mu wɔ mo anim nanso, minhu afobusɛm biara a megyina so mabu no fɔ. 15 Saa ara nso na Herode annya asɛm bi annyina so ammu no fɔ a ɛno nti, wasan de no abrɛ yɛn yi. Ɔnyɛɛ bɔne biara a ɛsɛ sɛ migyina so bu no kumfɔ. 16 Mɛbɔ no mmaa na magyaa no.”
17 Twam Afahyɛ biara, Pilato gyaa odeduani baako ma wɔn. 18 Pilato kasa no akyi no, nnipadɔm no nyinaa bɔ gyee so se, “Kum no, na gyaa Baraba ma yɛn.” 19 Baraba yi yɛ obi a ɔhwanyan ɔman na ɔsan dii awu nti, wɔde no too afiase.
20 Pilato kɔɔ so di maa Yesu pɛe sɛ ogyaa no. 21 Nanso wɔsan bɔ gyee so bio se, ‘Bɔ no asɛnnua mu! Bɔ no asɛnnua mu!”
22 Obisaa wɔn ne mprɛnsa so se, “Adɛn? Dɛn bɔne na wayɛ? Minhu afobusɛm biara a megyina so abu no kumfɔ. Mɛbɔ no mmaa na magyaa no.”
23 Nanso wɔbɔ gyee so ara maa wɔn nne bu faa Pilato de no so se, ɔmmɔ no asɛnnua mu.
24 Enti Pilato penee wɔn abisade no so maa wɔn. 25 Wogyaee Baraba a esiane sɛ ɔhwanyanee ɔman san dii awu no nti, wɔde no too afiase no maa wɔn. Na ɔde Yesu maa wɔn sɛnea wɔpɛ no.
26 Afei wɔde Yesu rekɔ akɔbɔ no asɛnnua mu no, wohyiaa Kireneni bi a wɔfrɛ no Simon sɛ ofi afum reba Yerusalem. Wɔkyeree no, hyɛɛ no ma ɔsoaa Yesu asɛnnua no wɔ ne kɔn ho, dii n’akyi. 27 Nnipadɔm a, mmea a wɔresu retwa agyaadwo fra wɔn mu no, tu dii n’akyi.
28 Yesu danee ne ho ka kyerɛɛ wɔn se, “Yerusalem mmea, munnsu me na munsu mo ho ne mo mma. 29 Na wɔka se, ‘Bere bi bɛba a, ɛbɛyɛ bere pa ama abonini.’ 30 Saa bere no na wɔbɛka akyerɛ mmepɔw se, ‘Dwiriw gu yɛn so,’ ne nkoko nso se, ‘Kata yɛn so!’ 31 Na sɛ wɔde eyi yɛ me a meyɛ dumono no a, dɛn na wɔde bɛyɛ mo a moyɛ duwui?” 32 Bere a wɔde Yesu rekɔ no, wɔde nnebɔneyɛfo baanu bi kaa ne ho sɛ wonkokum wɔn.
33 Woduu faako a wɔfrɛ hɔ Golgota no, wɔbɔɔ ɔne nnebɔneyɛfo baanu no asɛnnua mu a ɔbaako wɔ ne nifa na ɔbaako nso wɔ ne benkum.
34 Yesu kae se, “Agya, fa kyɛ wɔn, efisɛ, wonnim nea wɔreyɛ.” Afei asraafo no kyekyɛɛ ne ntade mu bɔɔ so ntonto fae. 35 Saa bere no na nnipadɔm no gyinagyina hɔ rehwɛ no. Yudafo mpanyimfo no dii ne ho fɛw se, “Ogyee ebinom nkwa; sɛ ose ɔno ne Kristo, Onyankopɔn Ba no a, onnye ne ho nkwa na yɛnhwɛ.”
36 Asraafo no nso dii ne ho fɛw de nsa a ɛkeka bi brɛɛ no, 37 kae se, “Sɛ wone Yudafo hene no a, gye wo ho nkwa.”
38 Wɔkyerɛw saa asɛm yi “YUDAFO HENE NO NI!” bɔɔ n’atifi wɔ asɛnnua no so.
39 Nnebɔneyɛfo baanu a na wɔn nso wɔabɔ wɔn asɛnnua mu no mu baako dii Yesu ho fɛw se, “Ɛnyɛ wo ne Kristo no? Gye wo ho na gye yɛn nso.”
40 Nanso ɔdebɔneyɛfo a ɔka ho no, kaa n’anim se, “Wunsuro Onyankopɔn? Hu sɛ yɛn nyinaa wɔ afobu koro no ara mu. 41 Yɛn de, saa asotwe yi fata yɛn; yɛn bɔne so akatua na yɛanya yi, na oyi de, ɔnyɛɛ bɔne biara.” 42 Ɔsan kae se, “Yesu, sɛ wudu w’ahenni mu a, kae me.”
43 Yesu buaa no se, “Merehyɛ wo bɔ sɛ, ɛnnɛ, wobɛka me ho wɔ Paradise.”
44 Eduu owigyinae no, asase no so nyinaa duruu sum kabii kosii nnɔn abiɛsa. 45 Owia duruu sum na ntama a etwa asɔredan no mu nso mu tew abien.
46 Yesu teɛɛm dennen se, “Agya, wo nsam na mede me honhom mehyɛ!” Ɔkaa eyi no, ogyaa mu.
47 Asraafo panyin a na ogyina hɔ no huu nea asi no, oyii Onyankopɔn ayɛ se, “Ampa ara, saa onipa yi yɛ ɔtreneeni.”
48 Nnipa a wɔbaa hɔ bɛhwɛɛ Yesu asɛnnuambɔ no hui sɛ wawu no, wɔde awerɛhow fii hɔ kɔe. 49 Saa bere no na Yesu nnamfo ne mmea bi a wodii n’akyi fi Galilea bae no gyinagyina akyirikyiri baabi rehwɛ nea ɛrekɔ so no nyinaa.
50 Na ɔbarima bi wɔ hɔ a wɔfrɛ no Yosef a ofi Arimatea a ɛwɔ Yudaman mu. Saa ɔbarima yi, na ɔyɛ onipa pa a ɔteɛ wɔ Onyankopɔn anim a na ɔretwɛn Onyankopɔn Ahenni a ɛbɛba no. 51 Ɛwom sɛ na ɔyɛ Yudafo baguafo no mu baako de, nanso wampene gyinae a wosisii ne nea wɔyɛe no so. 52 Ɔkɔɔ Pilato nkyɛn kɔsrɛɛ Yesu amu no. 53 Ɔma woyii Yesu amu no maa no, na ɔde nwera kyekyeree no de no kɔtoo ɔboda bi a obiara nnaa mu da no mu. 54 Wosiee Yesu Fida a na Yudafo resiesie wɔn ho atwɛn Homeda no.
55 Wosiee amu no wiei no, mmea a wodi Yesu akyi fi Galilea no ne Yosef kɔhwɛɛ faako a wɔde no toe ne sɛnea wosiee no fae. 56 Saa mmea yi san wɔn akyi kɔɔ fie kɔhwehwɛɛ nnuhuam ne ngo a wɔde besiesie Yesu amu no nanso esiane sɛ na Homeda no adu nti, wɔtenaa ase komm sɛnea Yudafo mmara kyerɛ no.
NA-TWI : Luka 23